Tag: linkin inmail | Martech Zone
Alahady, May 29, 2016 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Ny ekipa ao amin'ny Microsoft dia nametraka taratasy fotsy mahafinaritra momba ny fanamby sy ny fahombiazan'ny orinasam-pivarotana, ny famokarany ary ny fahafahany mampifanaraka sy mampiasa ny teknolojia. Matetika izahay no mihaona amin'ireo orinasa izay mivarotra valiny mahavariana avy am-bava sy antso mangatsiaka. Tsy misalasala mihitsy aho hoe na iza na iza amin'ireo paikady ireo no miasa - mazava ho azy fa mahomby izy ireo. Ny paikady varotra ho an'ny orinasa maro dia tsy niova tao anatin'ny folo taona mahery. Mampalahelo izany, satria inona izany